Gudoomiyaasha Degmooyinka gobolka Banaadir oo intooda badan xilka laga qaaday – Balcad.com Teyteyleey
Warar aan goordhaw ka helnay ilo ku dhaw Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka laga qaaday 15-kamid ah Gudoomiyaasha Degmooyinka gobolka Banaadir.
Waxaa saacadaha soo aadan la filayaa in si rasmi ah shaaca looga qaado Xil ka qaadista lagu sameeyay Gudoomiyaashii hore ee Degmooyinka gobolka Banaadir iyo magacaabista Gudoomiyaasha cusub ee Degmooyinka gobolka.
Sida aan Wararka ku helnay waxaa seefta Xil ka qaadista Gudoomiyaha gobolka Banaadir ay qaaday 15-kamid ah Gudoomiyaashii Degmooyinka gobolka, waxaana kaliya la reebay labo Gudoomiye degmo oo kala The great thing about our store is that you can buy your Lisinopril for only 0.51 USD and save big on the purchase! Hurry up to get your best Lisinopril deal now! ahg Gudoomiyaha Degmada Kaxda iyo Gudoomiyihii Dharkeenley oo loo wareejiyay Wadajir.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa saakay xafiiskiisa kula kulmay Gudoomiyaasha magacaaban ee Degmooyinka gobolka Banaadir, waxa uuna kala hadlay dar dar galinta shaqooyinka looga fadhiyo marka ay xilka la wareegaan.
Wararka kale aan heleyno ayaa sidoo kale sheegaya in xarunta maamulka gobolka Banaadir looga yeeray Gudoomiyasahii hore ee Degmooyinka gobolka Banaadir si loogu wargaliyo in xil ka qaadis lagu sameeyay.